झुक्किएर आएको एउटा कस्तो कल ! | Screennepal
झुक्किएर आएको एउटा कस्तो कल !
२०७५, २६ भाद्र मंगलवारscreennepalhot news, Offbeat0
काठमाडौं । शुक्रबार साँझ थियो । साथीहरुसँग ‘गुड फ्राइडे’ मुड बनाएर अनामनगरतिर हानिँदै थिएँ । न्युप्लाजा मोडिँदै गर्दा मोबाइलमा घण्टी बज्यो । नम्बर चिनेको थिएन । नम्बर थियो, ९८०३३….. ।
नचिनेको नम्बर हत्तपत्त उठाउने मेरो बानी छैन । र, उठाइनँ । फेरि घण्टी बज्यो । त्यतिखेर म बैद्यखाना रोड कट्दै लाग्दै थिएँ । जे–पर्ला उठाउनुप¥यो भनेर उठाएँ ।
‘हेल्लो, हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ’ मैले अपरिचति स्वरमै सोधेँ । ‘हेलो हजुर, फोन उठाउनु पनि कति गाह्रो ?’ उताबाट मिठो स्वरमा एक युवती बोलिन् । उनले चिनेजस्तै मायालु रिस पोखाएर भनिन्, ‘ठूला मान्छेले हाम्रो त फोन उठाउन पनि गाह्रो है’ ।
ती युवतीको बोल्नशैलीले मलाई लाग्यो, ‘यिनलाई कतै चिनेको हुनुपर्छ, मलाई झुक्याउँदै छे’ अनि भनेँ, ‘त्यस्तो होइन । तर, तपाइँलाई मैले चिन्न सकिनँ सरी, यहाँ को बोल्दै हुनुहुन्छ ? नाम भन्नुस् न ?’ नम्र स्वरमा अनुनय गर्दै भने । मेरो अनुनय सुनेर उनी बेस्सरी हाँसिन् । उनको हाँसोमा केही रहस्य लुकेको पाएँ । फेरि सोधेँ, ‘भन्नुस् न को बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ फेरि उनको त्यही हाँसो ।
छोटो हाँसोपछि नरम स्वरमा भनिन्, ‘सरी मैले आफ्नै ग्राहकलाई गरेकी हुँ । तर…, माइण्ड नगर्नुहोला ।’ यति भनेपछि फेरि उनले भनिन्, ‘म अर्पणा…, (नाम परिर्वन) म तपाइँलाई चिन्छु नि । पत्रकार होइन त तपाइँ ?’ ‘ए हो, धन्यावद’ मैले भनेँ, ‘तर, म तपाइँलाइँलाई चिन्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला ।’ उनी अक्मकिइन् ।
यता म उनले बोलेको ‘ग्राहक’ भन्ने शब्द सम्झिएँँ । अनि सोधेँ, ‘तपाइँको क्याफे वा रेष्टुरेण्ट छ हो ?’ ‘छैन’ छोटो जवाफ दिइन् अनि फेरि बोलिन्, ‘क्याफे त छैन । तर, सेवा र सुविधा क्याफे वा बारकै समान दिन सक्छु । कुनैदिन समयले जुराए भेटौँला नि सर ।’ उनले पहिलोपटक ‘सर’ भनिन् । फेरि उनी बोलिन्, ‘ल फोन राखेँ है, माइण्ड नगर्नुहोला, मेरो नम्बर यही हो । सम्झेर फोन गर्न सक्नुहुन्छ अनि कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुभएन त सर ?’
‘भन्नुस् न कहाँ बस्नुहुन्छ ?’ मैले सोेधेँ । ‘लाजिम्पातिर’ छोटो जवाफ दिइन् । अनि मैले आज्ञाकारी बालकजस्तै ‘ए हो, ओके, हवस्’ भनेँ । फोन काट्यो । फोन राखेपछि सम्झेँ, उनको नाम कता–कता सुनेँजस्तो लाग्यो । तर, अर्पणाको स्वर कहिल्यै सुनेजस्तो लागेन । उनको बोली यति मिठो थियो कि मैले पहिलोपटक युवतीको यस्तो मिठास स्वर सुनेको थिएँ, अनि बोल्ने भाषाशैली एकदमै ‘डिप्लोमेटिक’ थियो । मैले सम्झेँ, ‘यी युवती सभ्रान्त परिवारकी हुनपर्छ । प्रत्येक बोलीमा (आइसिओस्, नरिसाइसिओस्) इत्यादी ।’
फोनको घण्टी बज्यो । फोन साथीको रहेछ अर्थात डिसी नेपालका पत्रकार दिपेश राजथारुको । दिपेशले भन्यो, ‘ओ सुब्बा, खै त ढिलो भइसक्यो । चाँडो आउनुप¥यो ।’ ‘म आइसकेँ’ छोटो जवाफ दिएँ ।
मलाई त्यही युवती अर्थात् अर्पणालाई सम्झिरहेको थिएँ । मेरो मानसपटलमा उनै अर्पणा फनफनी घुमिरहेकी थिइन् । साथीहरुसँगको जमघटमा म उनै ‘अर्पणा’ अनि उनले बोलेको ‘मेरो ग्राहक’ शब्द र अर्को ‘क्याफे र बारको भन्दा कम छैन मेरो सुविधा’ भन्नेमा हराइरहेको थिएँ ।
बेला–बेला अखबारहरुमा पढ्दै र सुन्दै आएको थिएँ, ‘यो सहरमा ‘कलगर्ल’हरु प्रसस्तै छन् ।’ मनमा कौतुलता बढ्दै गएपछि एकजना पत्रकार साथीलाई सुनाएँँ, ‘आज एउटी युवतीले मेरो मनै उडाइदियो । कस्तो मिठो ती युवती हो । बोली सुन्दै भेटौँ–भेटौँ लाग्ने ।’ ‘नाम केहो’ उनले सोध्यो । मैले भने, ‘फलाना…’ । ‘ए यो नाम त कता–कता सुनँेजस्तो लाग्यो’ ती साथीले फेरि सोध्योे, ‘कहाँ बस्छिन् रे ?’ मैले भनेँ, ‘लाजिम्पाटतिर भन्थी, राम्ररी सोधिनँ ।’ त्यो साथी एकछिन् सोचमग्न बनेँ । ‘ए… बल्ल याद आयो, त्यो त कलगर्ल हो यार । कसरी तपाइँलाई कल गरेछ त ?’ साथीले प्रश्न गदै भने । ‘झुक्किएको रे’ मैले भने, ‘अनि मलाई त चिन्छु पो भन्यो त यार ।’ फेरि अर्पणाले भनेको ‘मेरो ग्राहक’ भन्ने शब्द सम्झेँ । त्यसपछि साथीले भनेको सम्झेँ ‘उनी कर्लगर्ल नै हुन्’ त्यसपछि मैले आफैले ‘भेरीफाई’ गरेँ, ‘हो, अर्पणा कलगर्ल नै हो । तर चानचुने होइन । उनी खानदार कलगर्ल हुन सक्छिन् ।’
साथीहरु ‘गुड फ्राइडे’मा मेडमा रमाइरहेका थिए । मचाहिँ अपर्णाको मलिन स्वरमा हराइरहेको थिएँ । र, ‘कलगर्ल’बारे सोचमग्न बन्दै गएँ । सहर विशेषगरी काठमाडौंमा ‘कलगर्ल’ (फोनमार्फत कन्ट्याक्ट गरेर यौन व्यापार गर्ने युवती)हरुको संख्या बढ्दै गएको छ भन्ने खबर बेला–बेला यहाँ राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा समेत प्रकाशित हुँदै आएको छ । त्यस्ता खबरहरु विशेष ध्यान दिएर पढ्ने गरेको छु किनकि, आजसम्म पढेको र सुनेको ‘कलगर्लहरु सभ्रान्त परिवारका हुन्छन् । उनी आफैँ सभ्रान्त परिवारको नभए पनि उनको सम्पर्क धनी, उद्योगी र नेताहरुसँग बढी हुन्छ ।’
ठ्याक्कै अर्पणाको बोल्नेशैली र हाँसोमा मैले त्यही पाएँ अनि साँेचे, ‘अर्पणाको अन्तरवार्ता लिनुपर्ला ।’ त्यतिखेर रातको पौने १० बजिसकेको थियो । हतारमा रुमतिर लागेँ ।
अर्पणालाई फोन लगाएँ । तर, उनको फोन ‘स्वीच अफ’ थियो । यदि फोन उठाएको भए म उनलाई भन्थे, ‘भोली समय मिल्यो भने कफि खान भेट्यौँ ?’ अनि त्यही समयमा ‘कलगर्ल’का कुरा कोट्याएर उनकै स्वीकृतिमा पत्रिकाको पाना रंग्याउने सोच थियो । तर, ‘स्वीच अप’ ।
राति पौने ११ बजेतरि कोठामा पुरानो पत्रिका, म्यागजिनहरु कोट्याउन थालेँ । त्यसैक्रममा करिब ४ वर्षअघिको ‘हिमाल खबर पत्रिका’ पाएँ । एउटा संयोग, पत्रिकाको पाना पल्टाउँदै जाँदा थोरै ‘कलगर्ल’को बारेमा सामग्री पस्केको रहेको छ त्यो बेला नै । जसमा लेखिएको थियो, ‘राजधानीमा फेरिँदै यौंनधन्दाको रुप ।’ अनि मैले सुनेजस्तै ‘सभ्रान्त परिवारका पुरुषहरु कलगर्लका ग्राहक हुन्छन्’ मनशायको शब्दचयन ।
हुन त उपत्यकामा बेला–बेला यौनधन्दाको आरोपमा प्रहरीले होटल र गेस्ट हाउसबाट युवा–युवतीहरुलाई पक्राउ गरेको समाचारहरु हिजोआज पनि आइरहेका छन् । ‘राजधानी यौनधन्दाको अखडा बन्दै छ’जस्ता शिर्षका समाचारहरु आएपनि ‘कलगर्ल’बारे त्यति आउँदैन किनकि, ‘कलगर्ल’ एक सुरक्षित यौन धन्दा’ हो, जसमा कन्ट्याक्ट भएहरुमात्र तिनीहरुका ग्राहक हुन्छन् । अर्को कुरा नेता, प्रसाशनका हाकिमहरु, व्यापारी र प्रहरीका अधिृकतसम्म ‘कलगर्ल’को कन्ट्याक्टमा हुन्छन् ।
केही महिनाअघि मात्र विदेशी युवतीहरु राजधानीमा ‘कल गर्ल’का रुपमा यौन व्यवसायिक सञ्चालन गर्दै आएको भन्ने समाचार बाहिरिको थियो । यस्तो व्यवसायिक गर्नेहरु आलिशान बंगला वा फ्लाट लिएर व्यवसायिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि सर्वसाधारणको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्दैन ।
रत्नपार्क, गंगबू, कंलकीजस्ता सामान्य होटल तथा रेष्टुरेन्टमा हुने यौनधन्दामाथि भने प्रहरीले बेला–बेला छापा मार्दै आएको छ । तर, त्यसरी समातिएका युवा–युवतीहरुलाई समेत के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रहरीसँग प्रावधान नहुँदा भोलिपल्ट छाडिने गरेका छन् । प्रहरी ‘कलगर्ल’सम्म पुग्ने त कुरै भएन ? पछिल्लो समय फेसबुक, वाट्अप, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालको सुविधाले गर्दा पनि यौनजन्य विकृतिहरु बढ्दै गएको छ । (दृष्टिबाट)
Previous Postशोसल मिडियामा ‘भाइरल’, आखिर को हुन् साक्षी ? (फोटो फिचरसहित) Next Postप्रदर्शनको तयारी ‘सायाबुङ’